Shiinaha EVA ama PO dhejis kulul dhalaalaya Warshadda, CE, Soosaarayaasha - Teknolojiyada Gogosha (Zhejiang) Co., Ltd.
Hoyga >Alaabta >Koollo dhalaalid kulul>EVA ama PO koollo dhalaalid kulul
Eva Heat Seam Sealing
Daabacaadda Eva Heat Seam waxay leedahay taakuleyn bilow ah oo heerkulkiisu hooseeyo, xoog diirka bilowga ah iyo iska caabbinta gabowga. Waxaa naga go'an inaan siino tayo sare oo dhalaalaya kululaynta, qaab dhismeedka deggan iyo gaarsiinta waqtiga. Waxaan ku guuleysannay kalsoonida macaamiisheenna suuqyada ASEAN iyo EU.
Baako dhalaalid kulul
Baakadan kulul ee ku jirta Baakadu waa xabag dhalaal kulul oo ku saleysan copolymer ethylene-vinyl acetate. Waa mid aan sun ahayn, dhadhan lahayn isla markaana aan lahayn milix. Waxaa naga go'an inaan siino tayo sare oo dhalaalaya kululaynta, qaab dhismeedka deggan iyo gaarsiinta waqtiga. Waxaan ku guuleysannay kalsoonida macaamiisheenna suuqyada ASEAN iyo EU.
Xabagta Kulul ee dhalaalka kulul ee shaandhada HEPA
Nadiifintayada dhalaalka kulul ee shaandhada HEPA waa nacnac polyolefin dhalaasho kulul oo leh caabbasho huruud badan leh waxaana la dhigi karaa muddo 3 sano ah iyadoo aan isu bedelin huruud. Waxaa naga go'an inaan siino tayo sare oo dhalaal kulul, oo leh qaab dhismeed deggan iyo gaarsiinta waqtigeeda Waxaan ku guuleysannay kalsoonida macaamiisheenna suuqyada ASEAN iyo EU.